Elderly men wait to be served a meal at Melfort Old People's home on the outskirts of Harare, Zimbabwe, Sunday, July 25, 2021. The economic ravages of COVID-19 are forcing some families in Zimbabwe to abandon the age old tradition of taking care of the elderly. Zimbabwe's care homes have experienced a 60% increase in admissions since the outbreak of the pandemic in March last year. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Elderly men share a light moment while smoking at Melfort Old People's home on the outskirts of Harare, Zimbabwe, Sunday, July 25, 2021. The economic ravages of COVID-19 are forcing some families in Zimbabwe to abandon the age old tradition of taking care of the elderly. Zimbabwe's care homes have experienced a 60% increase in admissions since the outbreak of the pandemic in March last year. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Rodrick Bhatare an elderly man in his 90s sits outside Melfort Old People's home on the outskirts of Harare, Zimbabwe, Sunday, July 25, 2021. Just a week after arriving at the facility, Rodrick Bhatare, in his 90s, said he felt a bittersweet moment at the celebration for a 103-year old fellow resident. “I haven’t been this happy in a very long time,” he said. “I just wished I was doing it with my family.” Hard-hit by the pandemic, his family could no longer provide for him, he said. The economic ravages of COVID-19 are forcing some families in Zimbabwe to abandon the age-old tradition of taking care of their elderly. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A 103 year old man is helped to cut a banana bread cake during his birthday celebrations at Melfort Old People's home on the outskirts of Harare, Zimbabwe, Sunday, July 25, 2021. The economic ravages of COVID-19 are forcing some families in Zimbabwe to abandon the age old tradition of taking care of the elderly. Zimbabwe's care homes have experienced a 60% increase in admissions since the outbreak of the pandemic in March last year. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Elderly men have lunch at Melfort Old People's home on the outskirts of Harare, Zimbabwe, Sunday, July 25, 2021. The economic ravages of COVID-19 are forcing some families in Zimbabwe to abandon the age old tradition of taking care of the elderly. Zimbabwe's care homes have experienced a 60% increase in admissions since the outbreak of the pandemic in March last year. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
An elderly man takes a walk at the Society for the Destitute Aged care home in Harare's Highfield township, Zimbabwe, Saturday June, 26, 2021. The economic ravages of COVID-19 are forcing some families in Zimbabwe to abandon the age old tradition of taking care of the elderly. Zimbabwe's care homes have experienced a 60% increase in admissions since the outbreak of the pandemic in March last year. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
An elderly man sits inside his room at the Society for the Destitute Aged care home in Harare's Highfield township, Zimbabwe, Thursday June 24, 2021. The economic ravages of COVID-19 are forcing some families in Zimbabwe to abandon the age old tradition of taking care of the elderly. Zimbabwe's care homes have experienced a 60% increase in admissions since the outbreak of the pandemic in March last year. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A man sweeps the premises at the Society for the Destitute Aged care home in Harare's Highfield township, Zimbabwe, Thursday June 24, 2021. The economic ravages of COVID-19 are forcing some families in Zimbabwe to abandon the age old tradition of taking care of the elderly. Zimbabwe's care homes have experienced a 60% increase in admissions since the outbreak of the pandemic in March last year. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Elderly men sit outside their rooms at the Society for the Destitute Aged care home in Harare's Highfield township, Zimbabwe, Thursday June 24, 2021. The economic ravages of COVID-19 are forcing some families in Zimbabwe to abandon the age old tradition of taking care of the elderly. Zimbabwe's care homes have experienced a 60% increase in admissions since the outbreak of the pandemic in March last year. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
An elderly man pushes a wheelbarrow at the Society for the Destitute Aged care home in Harare's Highfield township, Zimbabwe, Saturday June, 26, 2021. The economic ravages of COVID-19 are forcing some families in Zimbabwe to abandon the age old tradition of taking care of the elderly. Zimbabwe's care homes have experienced a 60% increase in admissions since the outbreak of the pandemic in March last year. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
An elderly person stands near a placard at the Society for the Destitute Aged care home in Harare's Highfield township, Zimbabwe, Saturday June, 26, 2021. Princess Diana officially opened an accommodation wing at the home amid much fanfare in 1993. The economic ravages of COVID-19 are forcing some families in Zimbabwe to abandon the age old tradition of taking care of the elderly. Zimbabwe's care homes have experienced a 60% increase in admissions since the outbreak of the pandemic in March last year. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)